I-Semalt: Amathiphu amathathu Okusebenzisa Amagama Angukhiye - Umhlahlandlela Wabaqalayo
Uma ucabanga nge-SEO, into yokuqala efika engqondweni amagama angukhiye .
Noma kunjalo, ukwazi isisusa sabo, ukuthi ungayisebenzisa kanjani , futhi okungafanele ukwenze kuyisici esibalulekile sokwakha okuqukethwe okumangalisayo okulungiselelwe kahle for izinjini.
Kusukela amagama angukhiye ahumusha inani eliphelele labasebenzisi abafuna umkhiqizo othize noma ulwazi, njengomlobi, isihloko sakho kufanele sitshele labo abasebenzisi futhi sihlangabezane nesidingo sabo.
Kodwa uthola kanjani ukubonakala kwezinto zakho ezinkulu?
Vumela i-Semalt iqale ngenhloso yamakhasimende noma intando yombuzo.
1. Isifiso Sombuzo
Ukuba nomqondo wezintandokazi zakho kuhlose kakhulu njengoba kunquma ukuthi bazoxhuma yini ngezinto zakho futhi baqhubeke befunda noma bebi kakhulu, beka.
Kunezinhlobo ezintathu zeminqopho yombuzo:
Sizogxila ekuthengisaneni kanye nolwazi ngoba yizo ezimbili ezidalwa indalo yokuqukethwe.
Umbuzo okwaziswa njengoba igama liphakamisa libhekisela kumuntu ofuna ulwazi oluthe xaxa ngenkathi ukuthengiselana kubonisa isenzo esithile esifuna ukuthatha.
Lezi zenzo ziyahlukahluka ngokuthenga umkhiqizo, ukulanda isofthiwe noma umculo, njalo njalo.
Funa ukuqonda ukuthi ngabe ikhasimende lakho elihlosiwe lifuna ulwazi noma umkhiqizo.
Isibonelo, Imikhiqizo yokulahlekelwa izinwele ezinhle noma Thenga i-LG single door friji ikhombisa umuntu ofuna ukuthenga umkhiqizo ngesikhathi Indlela yokwenza i-latte noma i-Jet lag ichaza umuntu ofuna ulwazi.
Ukuba nalolu lwazi kuzokusiza ukuba usebenze umsebenzi wakho ukuze uhambisane nezidingo ezithile zemakethe okuhlosiwe.
2. Ukwehliswa kwegama elingukhiye
Nakuba i-Google ishintshe ukugxila ekuhlinzekeni ulwazi olubalulekile kubasebenzisi futhi hhayi ukubeka okuqukethwe ngokusekelwe kumazwi angukhiye kuphela, isalokhu iyingxenye ebalulekile ye-SEO.
Izinjini zokusesha zisayisebenzisa ukuze zithole ukuthi i-athikili iyini..
Indlela engcono yokusabalalisa amagama angukhiye kuzoba ngowokuqala esihlokweni sakho, njengoba lokhu kuvumela izinjini zokusesha ukwazi ukuthi isihloko sakho sithini. Faka phakathi kubalingiswa bokuqala be-50 yakho.
Okwesibili, ziba yingxenye yemibhalo yakho engezansi bese ekugcineni, usakaze ngokulinganayo kuwo wonke ama-athikili wakho. Ungadluli.
Qinisekisa ukuthi umsebenzi wakho ufunde kahle.
Khumbula, inhloso yakho ukwakha izethameli.
Ngale ndlela uzogcina amakhasimende akho ebuyela ngokunye.
Izinto ezimbili okufanele uzigcine engqondweni lapha, ulwazi oluwusizo nokusebenza kahle.
3. Ukubamba iqhaza kwegama elingukhiye
Enye yeziphambeko ezivame kakhulu ukusetshenziswa kwamagama angukhiye ngokweqile. Lokhu kwaziwa ngokuthi ukugxila.
i-Google igxile ekugxilweni kwegama eliyisihluthulelo futhi liyimaka njengogaxekile, noma linikeza izigwegwe zalo. Ezimweni ezimbi kakhulu, amasayithi avinjelwe .
Uma ungumlobi, into yokugcina oyifunayo iwukuthi ikhasimende lakho lihlawulwe ngenxa yendaba oyibhale.
Uzokwazi kanjani uma uyinqobe? 1-3% isisindo esinconywayo eseluleka Semalt ochwepheshe .
Kunamathuluzi amaningi we-intanethi ongawasebenzisa ukubala ngokuzenzakalelayo lokhu.
Inhloso yakho ukukhiqiza umsebenzi wekhwalithi ohambisana kahle futhi uhlanganisa abantu. Awudingi konke okusemandleni akho ukuwela phansi.
Gxila kakhulu ekunikeni ulwazi ngumphathi we-Semalt futhi uzothola impumelelo yangempela Source .